Mifare Ultralight Chip အင်းလေး Card ကို, Mifare Ultralight Chip Inlay PVC Card, Mifare Ultralight Chip Inlay Plastic Card, Mifare Ultralight Inlay Card, Mifare Ultralight-C inlay card
Mifare Ultralight Chip အင်းလေး Card ကို
အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို Mifare Ultralight Chip အင်းလေး Card ကို, Mifare Ultralight Chip Inlay Plastic Card, Mifare Ultralight Chip Inlay PVC Card, Mifare Ultralight Inlay Card, Mifare Ultralight-C inlay card
chip အမျိုးအစား: Mifare MF0 IC U10
စံချိန်စံညွှန်းများ: IEC / က ISO 14443A
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 512 နည်းနည်း
Reading အကွာအဝေး: 5စင်တီမီတာစံဒက်စ်တော့စာဖတ်သူကို
တည်မြဲခြင်း: >10,000 ကြိမ်
ဒေတာကို retention ကိုအချိန်:5နှစ်ပေါင်း
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: PVC / ကို ABS / PET / PETG / စက္ကူ, လူမီနီယံသတ္တုပါး
ကဒ်အရွယ်အစား: 85.554 × 0.4mm ± 0,80 ×
Cards or labels made with NXP MF0 IC U10 are ISO14443A compliant and offer white cards, printing cards, paper stickers, key chains, TOKEN, and come inawide range of sizes and thin and thick cards. အဓိက applications များ: အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, တက်ရောက်သူ, conference attendance, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, စက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်, various membership cards, such as Shoufan, subway, bus token, clubs and other consumer electronics, electronic tickets, တိရိစ္ဆာန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, target tracking, laundry management , Card and so on.
Subway tickets, city traffic cards, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသေဆုံးသူ, ကားရပ်ခြံ, community management, access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ, ရေမီတာ prepaid, campus card, စသည်တို့ကို.
prev: Ntag203 Chip ကဒ်, Ntag213 Chip PVC Card ကို, Ntag215 အင်းလေး Card ကို
နောက်တစ်ခု: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF AZ-9662 အင်းလေး Card ကို, ဂြိုလ်သား h3 Long-range ကိုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို, ISO18000-6C အဖြူရောင်ကဒ်, ဂြိုလ်သား Higgs3 Card ကို